Niorina tamin'ny fahasoavana - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Ny fahasoavan'Andriamanitra > Niorina tamin'ny famindram-po
Moa ve ny lalana rehetra mankany amin'Andriamanitra? Misy ny mino fa ny fivavahana rehetra dia miovaova ny lohahevitra iray ihany - ataovy izany na mankany an-danitra. Raha vao zatra manomboka dia toy io ilay izy. Ny Hindoa dia nampanantena ny firaisan'ny mpino miaraka amin'andriamanitra tsy mitovy. Ny fidirana amin'ny nirvana dia mila asa tsara mandritra ny fahaterahana marobe. Ny bouddhisme izay mampanantena nirvana ihany koa dia mangataka ny fahamarinana efatra lehibe sy ny làlana valo valo arahin'ny marimarina.
Mampanantena paradisa ny finoana silamo - fiainana mandrakizay feno fahafaham-po sy fahafinaretana ara-nofo. Mba hahatongavana any dia ny mpino dia tsy maintsy manaraka ny fanekem-pinoana sy andry dimy amin'ny finoana silamo. Ny fiainana miaina tsara sy ny fanarahana ny fomban-drazana dia mitarika ny Jiosy mankany amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Mesia. Tsy misy mahay manavotra ny tranobe. Misy be foana foana raha - raha afaka manaraka ny fitsipika ianao dia hahazo ny valisoanao. Iray ihany ny "fivavahana" iray izay afaka miantoka vokatra tsara aorian'ny fahafatesana raha tsy miaraka amin'ny fotoana mitovy ary tafiditra ao ny valisoa amin'ny asa tsara na fomba fiaina mety. Ny Kristianisma dia ny fivavahana tokana tokana izay mampanantena sy mamonjy famonjena amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. I Jesosy irery no hany tsy misy fepetra hahazoana famonjena afa-tsy ny mino azy amin'ny maha Zanak'Andriamanitra azy izay maty noho ny fahotan'izao tontolo izao.
Ary noho izany dia tonga eo afovoan'ny hazo fijalian'ny hazofijaliana "Identity in Christ" isika. Ny asan'i Kristy, izay asan'ny fanavotana sy manolo ny asan'ny olona, ​​dia fahasoavana, mifototra amin'ny finoantsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia omena antsika ho fanomezana, fanomezana manokana, fa tsy valisoa amin'ny zavatra nataontsika. Isika dia ohatra amin'ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny hatsaram-panahiny amintsika, araka izay asehony amin'ny zavatra rehetra nataony tamin'i Kristy Jesosy (Efesiana 2).
Toa mora loatra anefa izany. Tianay ho fantatra foana hoe "inona no azony"? "Tsy mila manao zavatra hafa ve isika?" Tao anatin’ny 2.000 taona lasa izay, ny fahasoavana dia tsy takatry ny saina, nampiharina tamin’ny fomba diso, ary maro no nanampy betsaka tamin’izany. Mitombo noho ny fisalasalana sy ny fiahiahiana fa tsara loatra ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana ka tsy ho tanteraka ny lalàna. Nipoitra tany am-piandohana [ny Kristianisma]. Nanome torohevitra ho an’ny Galatianina momba izany i Paoly. “Izay rehetra te hohajaina amin’ny nofo dia manery anareo hoforana, nefa mba tsy hanenjika azy noho ny hazo fijalian’i Kristy [fa izany ihany no mamonjy azy].” (Galatiana 6,12).
Amin’ny maha mpino an’i Jesosy Mpamonjy antsika, dia eo ambanin’ny fahasoavana isika, fa tsy ambanin’ny lalàna (Romana 6,14 ary ny Efesianina 2,8). Fitahiana toy inona moa ny afaka amin'ny fitsangantsanganana kodiarana sy ny hazakazaka sakana. Fantatsika fa ny otantsika sy ny maha mpanota antsika dia voasaron’ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny fotoana rehetra. Tsy mila manao fampisehoana ho an'Andriamanitra isika, ary tsy mila mahazo ny famonjena antsika. Mitondra any amin’Andriamanitra ve ny lalana rehetra? Misy lalana maro, fa lalana iray ihany - ary mifototra amin'ny fahasoavana izany.